NBA ဘတ်စကတ်ဘောတံဆိပ်မှာ Kobe ရဲ့ရုပ်ပုံကိုထည့်သွင်းတော့မှာလား ? ? ? – SoShwe
Home/LifeStyle/NBA ဘတ်စကတ်ဘောတံဆိပ်မှာ Kobe ရဲ့ရုပ်ပုံကိုထည့်သွင်းတော့မှာလား ? ? ?
NBA ဘတ်စကတ်ဘောတံဆိပ်မှာ Kobe ရဲ့ရုပ်ပုံကိုထည့်သွင်းတော့မှာလား ? ? ?
So Shwe January 27, 2020	LifeStyle, Sport Leaveacomment
NBA ရဲ့ နာမည်အရှည်ကောက်ကတော့ National Basketball Association ပေါ့။ အမျိုးသား ဘတ်စကတ်ဘော ကစားသမားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အသင်းအဖွဲ့ကြီးပါ။ ဘတ်စကတ်ဘောကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေနဲ့ NBA အသင်းအဖွဲ့ဟာ အကြီးမားဆုံးသော ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုကိုကြုံဆုံခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ NBA ရဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ကစားသမားတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Kobe Bryant ဟာ မတော်တဆ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘတ်စကတ်ဘောလောကရဲ့ အကျော်အမော်ကြီးတစ်ဦးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာ NBA အသင်းအတွက်ရော Kobe Bryant ရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်ပါ အကြီးမားဆုံးသော ဆုံးရှုံးမှုပါ။
PETITION TO CHANGE THE NBA LOGO TO KOBE pic.twitter.com/6sswmD21ne
— sano (@DfsSano) January 26, 2020
လေယာဉ်ပေါ်လိုက်ပါစီးနင်းလာတဲ့အထဲမှာ Kobe Bryant ရဲ့ အချစ်ရဆုံးသော တစ်ဦးတည်းသော အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်သမီးလေး Gianna လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဖေ့သွေးပါတဲ့ Gianna လေးဟာလည်းဘတ်စကတ်ဘောကစားရတာကို နှစ်သက်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် Gianna နဲ့ Kobe တို့ဟာ ဘတ်စကတ်ဘောလေ့ကျင့်ရေးပြုလုပ်ဖို့ Mamba Academy ကို သွားနေချိန်မှာ သူတို့စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ လေယာဉ်ကြီးဟာ ပေါက်ကွဲထွက်သွားပါတော့တယ်။ လေယာဉ်ပေါက်ကွဲပျက်ကျမှုမှာ Kobe Bryant ၊ Gianna Bryant တို့နဲ့အတူတူ နောက်ထပ်ခရီးသည် ၇ ယောက်ဟာလည်း သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
Gianna လေးဟာ သူ့ရဲ့ဖခင်လိုမျိုး ကျော်ကြားတဲ့ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားမဖြစ်ခင်မှာပဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကြွေလွင့်ခဲ့ရပါတယ်။ လေယာဉ်ပျက်ကျပြီး အသက်သေဆုံးရတော့မယ်ဆိုတာကို သိရတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာ သူ့အတွက် သူရဲကောင်းဖခင်ကြီး Kobe ရှိနေခဲ့တာဟာ “အဆိုးထဲကအကောင်းပဲပေါ့” လို့ ပြောရတာတောင် အတော်လေးကို ကြေကွဲဆို့နင့်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
Kobe Bryant ရဲ့သေဆုံးမှုကို သိရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Kobe ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေဟာ NBA အသင်းရဲ တံဆိပ်မှာ Kobe Bryant ရဲ့ ရုပ်ပုံကိုထည့်သွင်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ တောင်းဆိုခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ရိုးရှင်းပါတယ်။ Kobe Bryant ဟာ ထူးချွန်တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာ သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိတော့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းနဲ့ နာမည်ကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာကျန်ရစ်နေစေချင်တဲ့ သဘောမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Kobe Bryant ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Michael Jordan ဟာ “Kobe က ဘတ်စကတ်ဘောကစားရာမှာ အရမ်းကိုထူးချွန်တဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့မိဘတွေအတွက်လည်း သားကောင်းတစ်ယောက်၊ ချစ်ဇနီးအတွက်လည်းခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက်၊ သားသမီးတွေအတွက်လည်း ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။
NBA ဘတ္စကတ္ေဘာတံဆိပ္မွာ Kobe ရဲ႕႐ုပ္ပံုကိုထည့္သြင္းေတာ့မွာလား ? ? ?
NBA ရဲ႕ နာမည္အရွည္ေကာက္ကေတာ့ National Basketball Association ေပါ့။ အမ်ိဳးသား ဘတ္စကတ္ေဘာ ကစားသမားေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ႀကီးပါ။ ဘတ္စကတ္ေဘာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူေတြနဲ႔ NBA အသင္းအဖြဲ႔ဟာ အႀကီးမားဆံုးေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈတစ္ခုကိုႀကံဳဆံုခဲ့ရပါတယ္။
၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ NBA ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတ့ဲ ကစားသမားေတြထဲက တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Kobe Bryant ဟာ မေတာ္တဆ ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈမွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။ ဘတ္စကတ္ေဘာေလာကရဲ႕ အေက်ာ္အေမာ္ႀကီးတစ္ဦးကိုဆံုး႐ႈံးလိုက္ရတာဟာ NBA အသင္းအတြက္ေရာ Kobe Bryant ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြအတြက္ပါ အႀကီးမားဆံုးေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈပါ။
ေလယာဥ္ေပၚလိုက္ပါစီးနင္းလာတဲ့အထဲမွာ Kobe Bryant ရဲ႕ အခ်စ္ရဆံုးေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္သမီးေလး Gianna လည္းပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ အေဖ့ေသြးပါတဲ့ Gianna ေလးဟာလည္းဘတ္စကတ္ေဘာကစားရတာကို ႏွစ္သက္တဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္တာေၾကာင့္ Gianna နဲ႔ Kobe တို႔ဟာ ဘတ္စကတ္ေဘာေလ့က်င့္ေရးျပဳလုပ္ဖို႔ Mamba Academy ကို သြားေနခ်ိန္မွာ သူတို႔စီးနင္းလိုက္ပါလာတဲ့ ေလယာဥ္ႀကီးဟာ ေပါက္ကြဲထြက္သြားပါေတာ့တယ္။ ေလယာဥ္ေပါက္ကြဲပ်က္က်မႈမွာ Kobe Bryant ၊ Gianna Bryant တုိ႔နဲ႔အတူတူ ေနာက္ထပ္ခရီးသည္ ၇ ေယာက္ဟာလည္း ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။
Gianna ေလးဟာ သူ႔ရဲ႕ဖခင္လိုမ်ိဳး ေက်ာ္ၾကားတဲ့ဘတ္စကတ္ေဘာကစားသမားမျဖစ္ခင္မွာပဲ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ေႂကြလြင့္ခဲ့ရပါတယ္။ ေလယာဥ္ပ်က္က်ၿပီး အသက္ေသဆံုးရေတာ့မယ္ဆိုတာကို သိရတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ႕ေဘးနားမွာ သူ႔အတြက္ သူရဲေကာင္းဖခင္ႀကီး Kobe ရွိေနခဲ့တာဟာ “အဆိုးထဲကအေကာင္းပဲေပါ့” လို႔ ေျပာရတာေတာင္ အေတာ္ေလးကို ေၾကကြဲဆို႔နင့္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။
Kobe Bryant ရဲ႕ေသဆံုးမႈကို သိရွိၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ Kobe ကိုခ်စ္တဲ့ပရိသတ္ေတြဟာ NBA အသင္းရဲ တံဆိပ္မွာ Kobe Bryant ရဲ႕ ႐ုပ္ပံုကိုထည့္သြင္းေပးဖို ႔ ေတာင္းဆိုလာၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြ ေတာင္းဆိုျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ႐ိုးရွင္းပါတယ္။ Kobe Bryant ဟာ ထူးခၽြန္တဲ့ ကစားသမားတစ္ဦး ျဖစ္တဲ့အေပၚမွာ သူဟာကမာၻေပၚမွာမရွိေတာ့ေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ဂုဏ္သတင္းနဲ႔ နာမည္ကေတာ့ ကမာၻေပၚမွာက်န္ရစ္ေနေစခ်င္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။
Kobe Bryant ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ Michael Jordan ဟာ “Kobe က ဘတ္စကတ္ေဘာကစားရာမွာ အရမ္းကိုထူးခၽြန္တဲ့ ကစားသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕မိဘေတြအတြက္လည္း သားေကာင္းတစ္ေယာက္၊ ခ်စ္ဇနီးအတြက္လည္းခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ေယာက္၊ သားသမီးေတြအတြက္လည္း ဖခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ဗ်ာ။
Previous ကြောက်မက်ဖွယ် သြစတြေးလျတောမီးလောင်မှုကြားမှာ ရှင်သန်ကျန်ရစ်နေနိုင်ခဲ့တဲ့ သတ္တဝါလေးများ။
Next အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ တိုက္စစ္မွဴးတစ္ေယာက္ကို စိတ္ဝင္စားလာျပန္သည့္ ယူႏုိက္တက္။
သမီးလေးအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေကို ထူးထူးဆန်းဆန်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့ ဖခင်။
Manchester က စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ် Phil Smith ဆိုသူဟာ သမီးလေး Sienna ရဲ့ အသက် ၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် …